China China Professional ahaziri Plastic Injection Mold Maka Car Central Control Panel emepụta na suppliers |DTG
Ọkachamara China ahaziri Plastic injection Mold For Car Central Control Panel
Nke a bụ plastic injection ebu nke nwere ike na-emepụta ụgbọ ala Central panel.N'okpuru bụ ụfọdụ ozi zuru ezu maka nke a plastic injection ebu.Mgbe okwu mmeghe a gachara, anyị kwenyere na unu ga-amatakwu maka ebu ntụtụ rọba akpaaka.
Ka anyị kwuo ụfọdụ nkọwa gbasara ịkpụ ntụtụ rọba.
Ihe ebu:NAK80 HRC48-52
Ịkpụzi ebu:na-ekpo ọkụ na-agba ọsọ pin point ọnụ ụzọ ámá
okirikiri ịgba ọgwụ:72 sekọnd
Ngwa ngwaahịa:ABS + PC
Ya mere, ihe bụ plastic injection ebu?
N'okwu, nke ahụ bụ ngwá ọrụ, nke enwere ike iji mepụta ngwaahịa plastik.Ọnụ ego mmepụta ihe ga-adị ọnụ ala karịa mmepụta ngwa ngwa prototype.
Kedu ihe bụ ịkpụzi injection?
Ịkpụzi injection bụ ụzọ a na-esi enweta ngwaahịa ndị a kpụrụ akpụ site n'ịbanye ihe plastik nke okpomọkụ gbazere n'ime ihe ebu, wee mee ka ọ dị jụụ ma mee ka ha sie ike.Usoro ahụ dabara maka mmepụta nke ngwaahịa ndị nwere ụdị mgbagwoju anya, ma na-ewere akụkụ dị ukwuu na mpaghara nhazi plastik.
Gịnị bụ ezi uche na-eri maka a plastic injection ebu?
Obere, otu oghere rọba ntụ ntụ na-erikarị ihe dị ka $2,000 na $5,000.Akpụkpọ anụ buru ibu ma ọ bụ gbagwojuru anya nwere ike na-eri karịa, na-abụkarị ihe ebu anyị mere na-eri nkezi larịị bụ ihe dịka $ 8000.
Mbipụta 3D ọ dị ọnụ ala karịa ịkpụzi injection?
Ịkpụzi injection dị ọnụ ala karịa mbipụta 3D ma ọ bụrụ na ị na-emepụta ihe karịrị 100 akụkụ.Ọ bụ ezie na ọnụ ahịa otu unit na-eji mbipụta 3D na-agbanwe agbanwe, ọnụahịa maka ịkpụzi injection na-akawanye mma karịa ka ị na-eji ebu gị arụpụta.
Kedu ka esi emepụta ebu?
A na-ejikarị ígwè ma ọ bụ aluminom mee ihe akpụ akpụ ma bụrụ nke a na-arụ nke ọma iji mepụta atụmatụ ha.A na-etinye ihe mmiri mmiri n'ime gbọmgbọm na-ekpo ọkụ, gwakọta ya, ma tinye ya n'ime oghere nke ebu ahụ, na-emecha mee ka ọ dị jụụ ma na-esi ike na nhazi nke ebu.... Ngwá ọrụ ígwè bụ ihe a na-ejikarị eme ihe na-emepụta ihe.
Nke gara aga: Omenala ABS Plastic Injection Molding Housing
Osote: OEM Design Custom High Precision Car Auto ABS/PMMA/POM Plastic Injection Mold with Hot Runner
OEM Plastic injection Tooling Mold nke Nchekwa ...